म कुनै नेताको गुटमा छैन,विद्यार्थीको गुटमा छु – YesKathmandu.com
म कुनै नेताको गुटमा छैन,विद्यार्थीको गुटमा छु
शुक्रबार २१, साउन २०७३
यही साउन २३­- २५ गतेसम्म नेपाल विद्यार्थी संघको माहाधिवेशन हुँदैछ । चुनावी मैदानमा विभिन्न गुट मार्फत प्रतिष्पर्धीहरु देखिएका छन । तिनै मध्यका एक हुन हरिश चन्द्र भण्डारी । महाधिवेशनमा ५ नम्बर प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीडन लागेका चन्द आफूलाई कुनै गुट र उपगुटका नभई विद्यार्थीहरुको उम्मेद्धार दावी गर्दछन ।२०५७ सालदेखि नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय उनै भण्डारी शंकरदेव क्याम्पस इकाइका सचिव हुँदै त्यहाँका अध्यक्ष समेत रहेर काम गरेको अनुभव छ । प्रस्तुत छ,नेविसंघ महाधिवेशनको सेरोफेरोमा एसकाठमाडौका लागि भरत रावलले उनै भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको अंश
तपाईको उपाध्यक्षमा उम्मेद्धारी दिनुभएको छ,एजेण्डाहरु के छन ?
पहिलो त समान शिक्षा, सरकारी होस वा नीजि अर्थात त्रिभुवन विश्वविद्यलायको समेष्टार प्रणाली नै किन नहोस । विद्यार्थीहरुले फाइदा लिन सकेका छैनन । विद्यार्थीहरुको क्षमता विस्तार गरी बजारमा बिक्न सक्ने खालको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नै शिक्षा छैन ।
अहिले नेविसंघमा तीनवटा गुट देखापरेको छ । गुटले तपाईको उम्मेद्धारीमा कतिको प्रभाव पार्छ ?
जो मान्छे आफुलाई कमजोर महशुस गर्दछ उसले गुट समाएर अगाडि बढने हो । जोसंग वास्तबिक नेतृत्व गर्ने क्षमता छ उनीहरुलाई गुटले केही प्रभाव पार्दैन । म गुटबन्दीको बिरोधमा छु पहिले देखिनै । विद्यार्थीहरुको हक हितको लागि लड्ने संस्थाको नेतृत्व विद्यार्थीहरुले नै छनोट गर्न पाउनुपर्दछ ।
तपाईले यस्तो बताइरहँदा नेबिसंघका कतिपए साथीहरु टिके अध्यक्ष बनाउन कम्मर कस्सेर लागि परेका छन ?
यो त गलत कुरा हो, पार्टी सभापतिले नै निर्वाचित भएलगतै भोटिङ सिष्टमबाटै चुनाव गराउँछु भन्नुभएको छ । त्यही कारणले पनि नेविसंघमा टिके अध्यक्ष बनाउने फोहोरी खेल हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु र पार्टी सभापतिले हामी सबैलाई विश्वस्थ पार्नुभएको छ ।
विगतका नजिरहरुलाई नियाल्ले हो भने महाधिवेशनको मिति तोकने, प्रतिनिधिहरु आएर फर्कने अवस्थापनि छ नि ?
हो,विगतमा आठ पटकसम्म महाधिवेशन स्थगित भयो । यस अगाडिका पार्टी सभापतिको जोड नेविसंघको निर्वाचन भन्दा पनि संविधान निर्माणमा केन्द्रीत रह्यो ।त्यस समयका लागि मुलुकको पहिलो आवश्यक्त्ता नै संविधान निर्माण थियो । कोइरालाकै नेतृत्वमा मुलुकले नयाँ संविधान पाएको हो । अहिलेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा दाईले भन्नुभएको छ ‘अब सँगठनलाई बलियो बनाउदै लैजानु पर्छ । उहाँ पार्टी सभापति भएको पहिलो मिटिङमा नै भन्नुभएको छ सबै भातृ संगठनहरुका अधिवेशन छ माहिना भित्र गरी सक्ने । सभापतिकै मुखबाट निस्केको कुरा हामीले कसरी नपत्याउनु ? हामी महाधिवेशन तयारीको अन्तिम अवस्थामा छौं । त्यसकारण दुबिधा छैन ।
यसमा तपाईको तयारी के के छ ?
म उपाध्यक्षको लागि मैदानमा उत्रिएको छु । विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर नेविसंघका लागि र पार्टीका लागि सर्मपण गरेको छु योगदान गरेको छु जिल्लाका क्षेत्रका क्याम्पहरु हुन अथवा केन्द्रका क्याम्पस, केन्द्र सबैठउमा योगदान दिएको छु । मलाई लाग्छ म भन्दा क्षमतावान, र विद्यार्थीमा मर्म बुझ्न सक्ने साथी प्रदेश नम्बर ५ बाट अरु कुनै माइकललाल छैन्न । साथीभाईहरुको सल्लाह,सुझाव अनुसार नै उपाध्यक्षमा उम्मेद्धारी दिएको हु ।
तपाइ आफूलाई कुनैपनि गुटमा छैन भनेर दावा गर्दै हुनुहुन्छ । नेताको आर्शिवाद नभई निर्वाचन कसरी जित्नुहुन्छ ?
म नेताको गुटमा छैन । तर विद्यार्थीको गुटमा छु । विद्यार्थीहरुको समुहमा रहेकै कारण म आफूलाई फलानो गुटमा जोडिएको छु भन्ने गर्दिन । मेरो विश्वाश सक्कली विद्यार्थी प्रति छ । गुटप्रति विश्वाश छैन । यसअगाडि स्वतन्त्र ररुपमा स्ववियु सभापति समेत रहेर काम गरे । सबैभन्दा बढी मत ल्याएर सभापति भएको हुँ । म आफ्नो कार्याक्षमा, दक्षता आफ्ना साथीभाईमा विश्वास गर्छु । गुट÷उपगुटमा होइन ।
आठ वर्षसम्म नेबिसंघको महाधिवेशन भएन तर यो बीचमा केहि बिद्यार्थी नेताहरुले चन्दा असुलेर घर घडेरी नै जोडिसके ?
हामीले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएको हो । राजनीतिमा सबै असल मान्छे मात्र छन म भन्दिन । पछिल्लो समयमा राजनीति ब्यवसाय हुन गयो । त्यसैकारण त नेविसंघ जस्तो गरिमामय ंस्थामा लुटाहा फटाहाहरुलाई स्थान नदिऊ भनेर मैले उम्मेद्धारी दिएको हुँ ।
तपाईहरुमाथि, विद्यार्थीको मतलाई भ¥याङ बनाएर चुनाव जित्ने तर उनीहरुको पीरमर्का बिर्सने गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ ?
समग्र राजनीति नै यहि सेरोफेरोमा चलेको छ । अहिलेका नेता,सभासद चुनाव लड्छन ,जित्छन तर गाँउ फर्कदैनन चुनाव जितेपछाडि । तर यसो भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन । भोलीको उदेश्य के हो ?कुन उदेश्यदले राजनीति गरिरहेको छ त्यो मुख्य कुरा हो । आफू मात्र अगाडि जाने स्वार्थी राजनीति होइन । ासथीभाईका पीर मर्का बुझ्ने र सँगै लैजाने राजनीति हामीले खोजेको हो ।
तपाईले देख्न चाहेको नेविसंघ चाहिँ कस्तो हो ?
पहिले त यो एउटा विशुद्ध विद्यार्थीहरुको संगठनहो यो । हेर्नुहोस,अहिले सबैभन्दा धेरै बिकृति शिक्षाक्षेत्रमा छ । त्यसकारण,यि सबै बिकृति र बिसंगतिको बिरुद्ध लडनुपर्दछ । यस प्रकारका सम्पूर्ण विकृती विसंगती विरुद्ध लड्ने नेविसंघ हामीले खोजेको नेविसंघ ।
पत्रकार लामाको असामयीक निधन
मधेशी नेता फकाउने प्रचण्डको सुत्र,मधेश आन्दोलनमा मारिएकालाई तत्कालै दश लाख
गोविन्द केसी विरुद्ध २७ डाक्टर, वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह!
बीरगन्जमा अनिश्चितकालिन कफ्र्यु
दसैँ नजिकिँदै गर्दा कालोबजारी बढ्यो
माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तद्वारा पार्टी एकता घोषणा
भाजपाको विहार चुनाव प्रचारबाट राजेन्द्र महतो धर्ना बस्न नेपालगन्ज भन्सारमा
सीमा निर्धारण सकेर आगामी फागुन—चैतसम्ममा निर्वाचन गर्ने सहमति
जब बैठकमा मोदी कर्मचारी विरुद्ध कुर्लिए……
टीकापुरबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बस धादिङमा दुर्घटना, ४९ जना घाइते
विमान दुर्घटनाप्रति भारतबाटै प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त
मन्त्रिपरिषदमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ :- मन्त्री थापा
टीकाको उत्तम साइत आज ८ः ४५ बजे, शुभ साइत भएकोले सामान्य मानिसले साइत खोज्नु नपर्ने
कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधिन पक्की पुल बगायोः चार करोड बराबरको क्षति
त्रिशुलीको किनारमा बाबुको शव अगाडी रुदै गरेकी रन्जनाले प्रहरी हवल्दारको ज्यान बचाइन
हिन्दु राष्ट्र अभियान असफल पार्न पार्टी फ़ुटाइयो – थापा
४५ सय सुरक्षकर्मीको लावालस्करसहित जनकपुरमा राष्ट्रपति मुखर्जीको भव्य स्वागत
दुताबासबाट मधेसी नेताहरुले घण्टौको क्लास लिएपछि हिंसात्मक बन्यो माहोल
प्रतिनिधिसभामा पराजित आरजुलाई राष्ट्रियसभामा लैजान दबाब